Ịgbatara Ụmụnna Anyị Ọsọ Enyemaka | Alaeze Chineke
Ihe ndị anyị na-eme mgbe ọdachi dakwasịrị ụmụnna anyị na-egosi na anyị hụrụ ha n’anya
1, 2. (a) Olee ihe kpara Ndị Kraịst nọ na Judia aka ọjọọ? (b) Olee ihe ụmụnna ha ndị nọ ebe ọzọ meere ha nke gosiri na ha hụrụ ha n’anya?
N’IHE dị ka afọ 46, ụnwụ dara na Judia, agụụ ana-aghụkwa ndị bi na ya anya. Nri dị oké ọnụ, ndị na-eso ụzọ Jizọs bi n’obodo a enweghịkwa ego ha ga-eji azụ nri. Ị hụ ha, ị ga-ama na agụụ akpaala ha aka ọjọọ. Ma, o nwere ihe Jehova chọrọ imere ha. Tupu afọ ahụ, o nwebeghị ndị na-eso ụzọ Jizọs o meerela ụdị ihe a. Gịnị ka ọ bụ?
2 Ahụhụ a ndị Juu bụ́ Ndị Kraịst na-ata na Jeruselem nakwa na Judia metụrụ ndị Juu bụ́ Ndị Kraịst bi n’ Antiọk na Siria n’obi. O metụkwara ndị Jentaịl bụ́ Ndị Kraịst n’obi. Ọ bụ ya mere ha ji tụkọta ego ha ga-eji enyere ụmụnna ndị ahụ aka. Mgbe ha tụkọtachara ego ndị ahụ, ha nyere ya Banabas na Sọl, bụ́ ụmụnna ndị ha tụkwasịrị obi. Ụmụnna ndị a wegaziiri ya ndị okenye nọ na Jeruselem ka ha jiri ya gbatara ụmụnna ndị nọ ebe ahụ ọsọ enyemaka. (Gụọ Ọrụ Ndịozi 11:27-30; 12:25.) Mgbe e nyere ụmụnna ndị a agụụ na-echi ọnụ n’ala ego ndị ahụ, olee otú i chere obi dị ha? O doro anya na ihe ọma a ụmụnna ha nọ n’Antiọk meere ha tọgburu ha atọgbu.
3. (a) Olee otú Ndị Kraịst taa si eme ihe ahụ Ndị Kraịst nọ n’Antiọk n’oge ndịozi mere? Kọọ otu ihe gosiri na anyị na-eme otú ahụ taa. (Gụọ ihe e dere n’igbe isiokwu ya bụ, “ Ọsọ Enyemaka Mbụ Gbara Ọkpụrụkpụ Anyị Gbataara Ụmụnna Anyị n’Oge Anyị A.”) (b) Olee ajụjụ ndị anyị ga-eleba anya na ha n’isiokwu a?
3 Ọsọ enyemaka a Ndị Kraịst bi n’Antiọk gbataara ụmụnna ha ndị bi na Jeruselem bụ nke mbụ Ndị Kraịst bi n’otu mba na-agbatara Ndị Kraịst ibe ha bi ná mba ọzọ ọsọ enyemaka. Anyị na-emekwa otu ihe ahụ taa. Ọ na-abụ anyị nụ na ọdachi dakwasịrị Ndị Kraịst ibe anyị bi n’obodo ọzọ, anyị agbatara ha ọsọ enyemaka. * Anyị ga-eleba anya ugbu a n’ajụjụ atọ gbasara ịgbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka. Ileba anya na ha ga-enyere anyị aka ịghọta na ịgbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka so n’ozi anyị na-ejere Jehova. Ajụjụ ndị ahụ bụ: Gịnị mere a ga-eji sị na ịgbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka so n’ozi anyị na-ejere Chineke? Gịnị mere anyị ji agbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka? Olee uru ọsọ enyemaka a na-abara anyị?
Ihe Mere E Nwere Ike Iji Sị na Ịgbatara Ụmụnna Anyị Ọsọ Enyemaka So ‘n’Ozi Dị Nsọ’ Anyị Na-ejere Chineke
4. Olee ihe Pọl gwara Ndị Kraịst nọ na Kọrịnt banyere ozi Ndị Kraịst na-ejere Chineke?
4 N’akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl degaara ndị Kọrịnt, o kwuru gbasara ozi abụọ Ndị Kraịst na-eje. Ọ bụ eziokwu na ndị Pọl degaara akwụkwọ ozi ahụ bụ Ndị Kraịst e tere mmanụ, ihe o dere gbasakwara Ndị Kraịst so ‘n’atụrụ ọzọ’ taa. (Jọn 10:16) Otu n’ime ozi ahụ anyị na-eje bụ “ozi nke ime ka a dị ná mma,” ya bụ, ozi ọma anyị na-ezi ndị mmadụ nakwa Baịbụl anyị na-akụziri ha. (2 Kọr. 5:18-20; 1 Tim. 2:3-6) Ozi ọzọ anyị na-ejekwa bụ ozi anyị na-ejere ụmụnna anyị. Pọl kpọrọ ụdị ozi a ‘ozi a na-ejere ndị nsọ.’ (2 Kọr. 8:4) A bịa n’ozi abụọ a Pọl kwuru okwu ya, ya bụ, “ozi nke ime ka a dị ná mma” na ‘ozi a na-ejere ndị nsọ,’ e si n’okwu Grik bụ́ di·a·ko·niʹa sụgharịta okwu bụ́ “ozi.” Olee ihe mere o ji dị mkpa ka anyị mata ihe okwu a pụtara?
5. Gịnị ka ihe Pọl kwuru gbasara ọsọ enyemaka na-egosi?
5 Otú ahụ Pọl si jiri otu okwu kwuo gbasara ozi abụọ ahụ anyị na-eje gosiri na, ma ịgbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka, ma ọrụ ndị ọzọ anyị na-arụ n’ọgbakọ so n’ozi anyị na-ejere Jehova. Tupu ya ekwuo gbasara ozi abụọ ndị ahụ, o kwuru, sị: “E nwekwara ije ozi dị iche iche, ma e nwere otu Onyenwe anyị ahụ; e nwekwara ịrụ ọrụ dị iche iche, . . . Ma ọrụ ndị a niile ka otu mmụọ nsọ ahụ na-arụ.” (1 Kọr. 12:4-6, 11) Nke bụ́ eziokwu bụ na Pọl kwuru na ozi dị iche iche anyị na-eje n’ọgbakọ so ‘n’ozi dị nsọ’ anyị na-ejere Chineke. * (Rom 12:1, 6-8) Ọ bụ ya mere o ji chee na o kwesịrị ekwesị ka ya were oge ya ụfọdụ ‘na-ejere ndị nsọ ozi.’—Rom 15:25, 26.
6. (a) Gịnị mere Pọl ji kwuo na ọsọ enyemaka anyị na-agbatara ibe anyị so n’ozi anyị na-ejere Chineke? (b) Olee otú anyị si agbatara ụmụnna anyị n’ụwa niile ọsọ enyemaka taa? (Gụọ ihe e dere n’igbe isiokwu ya bụ, “ Mgbe Ọdachi Mere!”)
6 Pọl nyeere Ndị Kọrịnt aka ka ha ghọta na ịgbatara ụmụnna ha ọsọ enyemaka so n’ozi ha na-ejere Jehova. O kwuru na ihe mere Ndị Kraịst ji agbatara ibe ha ọsọ enyemaka bụ n’ihi na ha “na-erube isi n’ozi ọma banyere Kraịst.” (2 Kọr. 9:13) N’ihi ya, ihe mere Ndị Kraịst ji na-enyere ibe ha aka bụ na ha chọrọ ime ihe Kraịst na-akụziri ha. Pọl kwukwara na ihe ọma Ndị Kraịst na-emere ibe ha bụ n’ihi “oké obiọma Chineke nke na-erughịrị mmadụ.” (2 Kọr. 9:14; 1 Pet. 4:10) Ọ bụ ya mere e ji kwuo ihe e kwuru n’Ụlọ Nche Bekee nke December 1, 1975 banyere ịgbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka. E kwuru, sị: “Obi kwesịrị isi anyị ike na ọsọ enyemaka anyị na-agbatara ụmụnna anyị na-eme Jehova Chineke na Ọkpara ya bụ́ Jizọs Kraịst, obi ụtọ.” N’eziokwu, ịgbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka so n’ozi dị nsọ anyị na-ejere Chineke.—Rom 12:1, 7; 2 Kọr. 8:7; Hib. 13:16.
Ibu Ezigbo Ihe n’Obi Na-agbatara Ụmụnna Anyị Ọsọ Enyemaka
7, 8. Gịnị bụ ihe mbụ mere anyị ji agbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka? Gịnị mere anyị ji kwuo otú ahụ?
7 Olee ihe anyị bu n’obi na-agbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka? Pọl zara ajụjụ a n’akwụkwọ ozi nke abụọ o degaara ndị Kọrịnt. (Gụọ 2 Ndị Kọrịnt 9:11-15.) Ná 2 Ndị Kọrịnt 9:11-15, Pọl kwuru ihe atọ mere anyị ji arụ “ọrụ a nke ijere ọha mmadụ ozi,” ma ọ bụ, ihe mere anyị ji agbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka. Ka anyị leba ha anya otu otu.
8 Nke mbụ bụ na ịgbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka na-eme ka e too Jehova. Ị̀ chọpụtara na ná 2 Ndị Kọrịnt 9:11-15, Pọl gwara ụmụnna ya gbasara Jehova Chineke ọtụtụ ugboro. Ọ gwara ha gbasara ‘ịna-enye Chineke ekele,’ gwakwa ha gbasara “ọtụtụ okwu ekele a na-enye Chineke.” (Amaokwu nke 11, na nke 12) O kwuru gbasara otú ọsọ enyemaka Ndị Kraịst na-agbatara ibe ha si eme ka a “na-enye Chineke otuto,” nakwa ka a na-eto Chineke maka ‘oké obiọma ya nke na-erughịrị mmadụ.’ (Amaokwu nke 13, na nke 14) Ihe ikpeazụ Pọl kwuru gbasara ọsọ enyemaka a Ndị Kraịst na-agbatara ibe ha bụ: “Ekele dịrị Chineke.”—Amaokwu nke 15; 1 Pita 4:11.
9. Olee otú ọsọ enyemaka anyị na-agbatara ụmụnna anyị si eme ka ụfọdụ ndị gbanwee otú ha si ele anyị anya? Kọọ otu ihe gosiri na nke ahụ bụ eziokwu.
9 Ndị Chineke taa weere na ọsọ enyemaka ha na-agbatara ibe ha na-emekwa ka e nye Jehova otuto, nakwa ka a na-achọ ozizi ya mma. (1 Kọr. 10:31; Taị. 2:10) O doro anya na ọsọ enyemaka Ndịàmà Jehova na-agbatara ụmụnna ha na-emekarị ka ụfọdụ ndị kwụsị ịkpọ anyị na Jehova aha ọjọọ. Dị ka ihe atụ: E nwere otu nwaanyị bi n’otu obodo ajọ ifufe kpara mkpamkpa. Tupu ajọ ifufe a efee, o nwere akwụkwọ nwaanyị a kwo Ndịàmà Jehova mapawa n’ọnụ ụzọ ya. Ihe e dere na ya bụ: “Achọghị M Ka Ndịàmà Jehova Bịa n’Ụlọ M.” Mgbe ajọ ifufe ahụ fechara, nwaanyị a nọ n’ụlọ ya otu ụbọchị hụ ebe ndị ọrụ enyemaka na-arụzi otu ụlọ ajọ ifufe ahụ mebiri. Ọ nọ na-ele otú ha si na-arụ ọrụ ruo ọtụtụ ụbọchị. Mgbe ọ chọpụtara na ndị ọrụ a na-eme ka ụmụnne, ọ gara ebe ahụ ka ọ mara ndị ha bụ. Mgbe o rutere ebe ahụ, a gwa ya na ha bụ Ndịàmà Jehova, ya eju ya anya. Ihe dapụrụ ya n’ọnụ bụ: “Echeburu m na unu bụ ndị ọjọọ.” Gịnị ka nwaanyị a meziri? Ọ gara wepụ ihe ahụ o kwo Ndịàmà Jehova mapawa n’ọnụ ụzọ ya.
10, 11. (a) Olee ihe ndị anyị meerela ụmụnna anyị nke gosiri na anyị na-enye ha ihe na-akpa ha n’ụba? (b) Olee akwụkwọ na-enyere ụmụnna anyị aka mgbe ha na-agbatara ibe ha ọsọ enyemaka? (Gụọ ihe e dere n’igbe isiokwu ya bụ, “ Ihe Na-enyekwuru Ụmụnna Aka Ịgbata Ọsọ Enyemaka.”)
10 Nke abụọ bụ na ọ na-eme ka anyị ‘na-enye ụmụnna anyị ihe na-akpa ha n’ụba.’ (2 Kọr. 9:12a) Ọ na-agụsi anyị agụụ ike inye ụmụnna anyị ihe na-akpa ha na ime ka ahụhụ ha na-ata belata. Gịnị mere anyị ji eme otú ahụ? Ọ bụ n’ihi na ọgbakọ Ndị Kraịst dị ka “otu ahụ́.” Ọ bụrụkwa na “otu akụkụ ahụ́ na-ata ahụhụ, akụkụ ndị ọzọ dum na-eso ya ata ahụhụ.” (1 Kọr. 12:20, 26) N’ihi ya, ọ bụ otú ụmụnna anyị si hụ ibe ha n’anya na-eme, ọtụtụ n’ime ha nụhaala na e nwere ụmụnna ha ọdachi dakwasịrị, ha ahapụ ihe ọ bụla ha na-eme, chịrị ngwá ọrụ ha, gawa ebe ahụ ka ha nyere ụmụnna ha ndị ahụ aka. (Jems 2:15, 16) Dị ka ihe atụ, mgbe ala ọma jijiji kpara mkpamkpa na Japan n’afọ 2011, alaka ụlọ ọrụ anyị dị n’Amerịka degaara Kọmitii Ndị Na-ahụ Maka Iwu Ihe Owuwu n’Ógbè n’Amerịka akwụkwọ ka ha “lee ma à ga-enweta ụmụnna ole na ole” ga-ewepụta onwe ha ịga Japan rụghachi Ụlọ Nzukọ Alaeze ndị dị ebe ahụ. Ị̀ ma ihe merenụ? N’ime izu ole na ole alaka ụlọ ọrụ degachaara kọmitii ahụ akwụkwọ ozi, ihe fọrọ obere ka o ruo narị ụmụnna isii wepụtara onwe ha ịga ebe ahụ. Ha kwukwara na ha ga-akwụrụ onwe ha ụgwọ ụgbọelu. Ndị na-elekọta alaka ụlọ ọrụ anyị dị n’Amerịka kwuru, sị: “Otú ụmụnna si wepụta onwe ha tụrụ anyị n’anya.” Otu nwanna onye Japan jụrụ otu n’ime ụmụnna ndị a si mba ọzọ bịa inyere ha aka ihe mere o ji bịa inyere ha aka. Nwanna ahụ gwara ya, sị: “Anyị na ụmụnna anyị ndị Japan bụ ‘otu ahụ́.’ Ahụhụ ha na-ata na-emetụkwa anyị n’ahụ́.” Ụmụnna ndị a na-agbatara ụmụnna ha ọsọ enyemaka anaghị achọ ihe ga-abara naanị ha uru. E nwedịrị mgbe ha na-eme ihe nwere ike ịta isi ha ebe ha na-achọ inyere ụmụnna ha aka. *—1 Jọn 3:16.
ỌSỌ ENYEMAKA MBỤ GBARA ỌKPỤRỤKPỤ ANYỊ GBATAARA ỤMỤNNA ANYỊ N’OGE ANYỊ A
NA Septemba afọ 1945, ya bụ, ọnwa ole na ole a lụchara Agha Ụwa nke Abụọ na Yurop, Nwanna Knorr mara ọkwa na a ga-amalite izigara “ụmụnna anyị ndị nọ ná mkpa ná mpaghara ụfọdụ na Yurop ihe ndị e ji enyere ndụ aka.”
Izu ole na ole ka ọ machara ọkwa a, Ndịàmà Jehova nọ na Kanada, n’Amerịka, nakwa n’obodo ndị ọzọ malitere ịhọpụtasị ákwà ndị ụmụnna nyere n’onyinye, ma na-apịanye ha n’akpa. Ha malitekwara iwekọta ihe oriri. Malite na Jenụwarị afọ 1946 gawa, a malitere izigara ụmụnna anyị ihe ndị ahụ n’Ọstria, Beljọm, Bọlgeria, Chaịna, Chekoslovakia, Denmak, Ingland, Finland, Frans, Jamanị, Gris, Họngeri, Ịtali, Nedalandz, Nọọwee, Filipinz, Poland, na Romenịa.
Ọ bụghị otu ugboro ka e bugaara ha ihe ndị ahụ. A nọ na-ebugara ha ihe ndị ahụ ruo afọ abụọ na ọnwa isii n’ihi na agha ụwa nke abụọ ahụ kpara obodo ha aka ọjọọ. N’oge ahụ, ọ bụ ihe dị ka iri puku ụmụnna asatọ na puku ise nyere ihe ndị ahụ n’onyinye. Nri ha nyere n’onyinye ga-eju ihe dị ka gwongworo iri atọ na abụọ. Ha nyekwara ákwà ga-eju ihe dị ka gwongworo iri anọ na ise, nakwa akpụkpọ ụkwụ karịrị otu narị puku, iri puku abụọ na puku anọ. Ọ bụ n’ọnwa Ọgọst, afọ 1948 ka a kwụsịrị ibugara ha ihe ndị ahụ. Otu Ụlọ Nche e bipụtara n’afọ 1949 kwuru, sị: “O doro anya na ihe ndị a anyị bugaara ụmụnna anyị gosiri na anyị hụrụ ha n’anya. Anyị ma na ihe mere ụmụnna anyị ji nye onyinye ndị a bụ ka e too Onyenwe anyị. Ha ma na aka a ha nyeere ụmụnna anyị ga-enyere ụfọdụ n’ime ha aka ịkwụsi ike n’ofufe ha na-efe Chineke. Obi dị ha ezigbo ụtọ na Chineke ji ha nyere ụmụnna ha aka.” Ọsọ enyemaka a a gbataara ụmụnna ndị a mere ka e too Jehova. O mekwara ka obi ruo ụmụnna ndị ahụ ala, meekwa ka anyị na ụmụnna anyị n’ụwa niile dịrịkwuo n’otu.
11 Ọsọ enyemaka a anyị na-agbatara ụmụnna anyị na-emekwa ka ndị na-abụghị Ndịàmà Jehova na-ekwu okwu ọma gbasara anyị. Dị ka ihe atụ, na 2013, e nwere mkpamkpa kpara na steeti Akan sas, dị n’Amerịka. Mgbe ihe a mechara, otu akwụkwọ akụkọ kọrọ otú Ndịàmà Jehova si gaa ozugbo ka ha nyere ndị mmadụ aka. Akwụkwọ akụkọ ahụ kọrọ, sị: “Otú Ndịàmà Jehova si ahazi ndị òtù ha na-agbatara ndị ọzọ ọsọ enyemaka dị egwú. Ọ na-eme ka ha gaa ebe ọdachi mere ozugbo na-enyere ndị mmadụ aka.” O doro anya na ihe ahụ Pọl onyeozi kwuru bụ eziokwu. Anyị ‘na-enye ụmụnna anyị ihe na-akpa ha n’ụba.’
12-14. (a) Gịnị mere inyere ụmụnna anyị ọdachi dakwasịrị aka ka ha maliteghachi ije ozi ọma na ọmụmụ ihe ji dị oké mkpa? (b) Olee ihe ụmụnna anyị ọdachi dakwasịrị kwuru nke gosiri na ịga ozi ọma na ọmụmụ ihe na-abara anyị ezigbo uru?
12 Nke atọ bụ na anyị na-enyere ụmụnna anyị ọdachi dakwasịrị aka ka ha maliteghachi ịga ozi ọma na ọmụmụ ihe. Gịnị mere nke a ji dị mkpa? Pọl kwuru na ọsọ enyemaka ahụ a gbataara ha ga-eme ka ha ‘na-enye Chineke ọtụtụ okwu ekele.’ (2 Kọr. 9:12b) Otú kacha mma ndị ahụ a gbataara ọsọ enyemaka ga-esi kelee Jehova bụ ịmaliteghachi ịga ozi ọma na ọmụmụ ihe. (Fil. 1:10) Otu Ụlọ Nche e bipụtara n’afọ 1945 kwuru, sị: “Pọl kwadoro . . . ka a nakọta onyinye maka na ọ na-eme ka . . . Ndị Kraịst nọ ná mkpa nwee ike ịzụta ihe ndị dị ha mkpa ha ga-eji enyere ndụ aka. Ọ na-emekwa ka ha nwee ume ịgbara Jehova àmà.” Ọ bụkwa otu ihe ahụ ka anyị bu n’obi agbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka. Ọ bụrụ na ụmụnna anyị ndị a amaliteghachi izi ozi ọma, ha na-akasi ndị agbata obi ha obi, kasiekwa onwe ha obi.—Gụọ 2 Ndị Kọrịnt 1:3, 4.
13 Ka anyị leba anya ugbu a n’ihe ụfọdụ ụmụnna anyị a gbataara ọsọ enyemaka kwuru. Anyị ga-ahụ otú ozi ọma ha maliteghachiri izi si kasie ha obi. Otu nwanna nwoke kwuru, sị: “Ozi ọma mụ na ndị ezinụlọ m maliteghachiri izi baara anyị ezigbo uru. Ka anyị na-akasi ndị ọzọ obi, anyị anaghị echegbucha onwe anyị maka ọdachi ahụ dakwasịrị anyị.” Otu nwanna nwaanyị kwuru, sị: “Izi ndị ọzọ ozi ọma na-eme ka obi m pụọ n’ihe niile ọdachi ahụ mebiri. O mere ka ahụ́ ruo m ala.” Nwanna nwaanyị ọzọ kwuru, sị: “O nwere ọtụtụ ihe ndị anyị na-amaghị ihe anyị ga-eme, ma, ozi ọma mere ka ndụ ezinụlọ anyị nwee isi. Ịkọrọ ndị ọzọ banyere ụwa ọhụrụ mere ka obi sie anyị ike na Chineke ga-eme ka ihe niile dị ọhụrụ.”
14 Ịga ọmụmụ ihe so n’ihe ọzọ ụmụnna anyị ọdachi dakwasịrị kwesịrị ibido mewe ozugbo. Ka anyị leba anya n’ihe mere otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Kiyoko. Nwanna nwaanyị a dị ihe dị ka iri afọ ise na asatọ. Ala ọma jijiji mere n’obodo ha lara ihe niile o nwere n’iyi ma e wezụga uwe na akpụkpọ ụkwụ o yi mgbe ahụ. Ọ nọ na-eche ma ò nwere mgbe ihe ga-emecha dịrị ya mma. Ka ọ nọ na-eche ihe a, otu okenye nọ n’ọgbakọ ha bịakwutere ya ma gwa ya na ha ga-anọ n’ụgbọala ya, ya bụ, n’ụgbọala okenye a, nwee ọmụmụ ihe ha na-enwe n’Ụlọ Nzukọ Alaeze. Nwanna Nwaanyị Kiyoko kwuru, sị: “Mgbe oge ọmụmụ ihe ahụ ruru, mụ na okenye a na nwunye ya nakwa nwanna nwaanyị ọzọ nọ ọdụ n’ụgbọala ahụ. Anyị egbughị oge n’ọmụmụ ihe ahụ. Ma, o mere ka obi m pụọ n’ọdachi ahụ merenụ. Obi bịara ruo m ala. Ọmụmụ ihe ahụ mere ka m ghọta nke ọma na ọmụmụ ihe anyị na-abara anyị ezigbo uru.” E nwere ihe otu nwanna nwaanyị ọzọ kwuru banyere ọmụmụ ihe ha nwere n’oge ahụ ọdachi dakwasịchara ha. Ọ sịrị: “Ọmụmụ ihe ndị ahụ nyeere m ezigbo aka idi ihe mere anyị.”—Rom 1:11, 12; 12:12.
Ọsọ Enyemaka Anyị Na-agbatara Ụmụnna Anyị Na-aba Ezigbo Uru
15, 16. (a) Olee uru Ndị Kraịst nọ na Kọrịnt na ebe ndị ọzọ ritere n’ihi na ha gbataara ụmụnna ha ọsọ enyemaka? (b) Oleekwa uru ọsọ enyemaka anyị na-agbatara ụmụnna anyị taa na-abara anyị?
15 Mgbe ahụ Pọl na-agwa Ndị Kọrịnt banyere ọsọ enyemaka Ndị Kraịst na-agbatara ibe ha, ọ kọwaara ha uru ma hanwa ma Ndị Kraịst ibe ha ga-erite ma ha na-agbatara ibe ha ọsọ enyemaka. Ọ gwara ha, sị: “Sitekwa n’ịrịọsi arịrịọ ike n’ihi unu, agụụ unu na-agụsi ha ike [ya bụ, ndị Juu bụ́ Ndị Kraịst nọ na Jeruselem a gbataara ọsọ enyemaka,] n’ihi oké obiọma Chineke nke na-erughịrị mmadụ nke dị n’ahụ́ unu.” (2 Kọr. 9:14) N’eziokwu, aka ụmụnna nọ na Kọrịnt nyeere ndị Juu bụ́ Ndị Kraịst ga-eme ka ndị Juu a bụ́ Ndị Kraịst rịọ Jehova ka ọ gọzie ụmụnna ha a nọ na Kọrịnt, nakwa Ndị Kraịst bụ́ ndị mba ọzọ. Ọ ga-emekwa ka ndị Juu ahụ bụ́ Ndị Kraịst hụkwuo ha n’anya.
16 Ụlọ Nche Bekee nke December 1, 1945, kwuru uru ịgbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka na-abara anyị taa otú ahụ Pọl kwuru. Ọ sịrị: “Mgbe ndị Chineke nọ n’otu ebe gbataara ụmụnna ha nọ ebe ọzọ ọsọ enyemaka, ọ na-eme ka ha dịrịkwuo n’otu.” Ụmụnna ndị na-aga agbatara ụmụnna ha ọsọ enyemaka achọpụtala na ihe a bụ eziokwu. Otu okenye so nyere ụmụnna ya aka mgbe idei mmiri mebisịrị ihe ha kwuru, sị: “Inyere ụmụnna m ndị a aka emeela ka mụ na ha dịrịkwuo ná mma.” Otu nwanna nwaanyị obi dị ụtọ n’ihi aka e nyeere ya mgbe ọdachi dakwasịrị ya kwuru, sị: “Ihe kacha mkpa anyị nwere ugbu a ruokwa mgbe ụwa ga-aghọ Paradaịs bụ ụmụnna anyị.”—Gụọ Ilu 17:17.
17. (a) Olee otú ihe e kwuru n’Aịzaya 41:13 si gbasa ọsọ enyemaka anyị na-agbatara ụmụnna anyị? (b) Kọọ ihe ụfọdụ merenụ nke gosiri na ọsọ enyemaka anyị na-agbatara ụmụnna anyị na-eme ka e too Jehova, na-emekwa ka anyị dịrịkwuo n’otu. (Gụọkwa ihe e dere n’igbe isiokwu ya bụ, “ Ụmụnna Si Mba Dị Iche Iche Agbatara Ụmụnna Ha Ọsọ Enyemaka.”)
17 Mgbe ụmụnna anyị si ebe ọzọ bịa inyere ụmụnna ha ọdachi dakwasịrị aka, ụmụnna ndị a ọdachi dakwasịrị na-achọpụta na Chineke na-emezu nkwa o kwere anyị. Jehova sịrị: “Mụ onwe m, bụ́ Jehova Chineke gị, sekpụ gị n’aka nri gị. Ọ bụ m bụ Onye na-asị gị, ‘Atụla egwu. Mụ onwe m ga-enyere gị aka.’” (Aịza. 41:13) Otu nwanna nwaanyị ọdachi dakwasịrị kwuru, sị: “Mgbe ihe a mere, ọ dị m ka ụwa m ọ̀ gwụla. Ma, Jehova nyeere m ezigbo aka. Aka ụmụnna nyeere m riri m ọnụ.” Mgbe ala ọma jijiji kpachara mkpamkpa n’otu obodo, ndị okenye abụọ bi n’obodo ahụ degaara alaka ụlọ ọrụ ha akwụkwọ ozi n’aha ọgbakọ ha. Ha dere, sị: “Ala ọma jijiji a gbawara anyị obi, ma Jehova si n’aka ụmụnna anyị nyere anyị aka. Anyị agụọla banyere otú ụmụnna anyị si gbatara ibe ha ọsọ enyemaka n’oge ndị gara aga. Ma ugbu a, anyị ejirila anya anyị hụ ya.”
O MERE KA Ọ MATA IHE O KWESỊRỊ IJI NDỤ YA MEE
OLEE uru ndị na-eto eto na-erite ma ha gaa inyere ụmụnna ndị ọdachi dakwasịrị aka? Ka anyị lebagodị anya n’ihe gbasara otu nwanna so gbatara ụmụnna anyị ọdachi dakwasịrị ọsọ enyemaka. Aha ya bụ Peter Johnson. Ọ dị afọ iri na asatọ mgbe ihe a mere. Nke a bụ nke mbụ ọ na-agbatara ụmụnna ọsọ enyemaka. O kwuru, sị: “Otú obi si dị ụmụnna ndị ahụ ụtọ, nakwa otú obi si dị mụnwa ụtọ n’ọsọ enyemaka ahụ m gbataara ha, mere ka m kpebisikwuo ike iji ndụ m jeere Jehova ozi otú m nwere ike.” Nwanna Peter mechara bụrụ onye ọsụ ụzọ. Ka oge na-aga, o jewere ozi na Betel, mechaakwa soro na Kọmitii Na-ahụ Maka Iwu Ihe Owuwu n’Ógbè. Nwanna Peter kwuru, sị: “Ọsọ enyemaka mbụ ahụ m so gbatara umụnna anyị n’afọ 1974 mere ka m mara ihe m kwesịrị iji ndụ m mee.” Ị̀ bụ onye na-eto eto? Ì nwere ike ime ihe a nwanna a mere? I mee ihe a Peter mere, ọ ga-eme ka ị mara ihe i kwesịrị iji ndụ gị mee n’ozi ị na-ejere Jehova.
Ò nwere Otú I Nwere Ike Isi Nye Aka?
18. Ọ bụrụ na ị chọrọ i so gbatara ụmụnna anyị ọdachi dakwasịrị ọsọ enyemaka, olee ihe ị ga-eme? (Gụọ ihe e dere n’igbe isiokwu ya bụ, “ O Mere Ka Ọ Mata Ihe O Kwesịrị Iji Ndụ Ya Mee.”)
18 Ị̀ ga-achọ inwe ụdị obi ụtọ ụmụnna gị na-enwe ma ha gbatara ibe ha ọsọ enyemaka? Ọ bụrụ na ị ga-achọ, cheta na a na-esikarị n’ụmụnna na-arụ Ụlọ Nzukọ Alaeze ahọrọ ndị ga-aga enyere ụmụnna ọdachi dakwasịrị aka. N’ihi ya, gwa ndị okenye unu ka ha nye gị fọm ị ga-edejupụta. Otu okenye garala ebe dị iche iche nyere ụmụnna ọdachi dakwasịrị aka kwuru, sị: “I kwesịghị ịga ebe ahụ ọdachi ahụ mere ma ọ bụrụ na Kọmitii Na-ahụ Maka Ịgbatara Ndị Ọdachi Dakwasịrị Ọsọ Enyemaka agwaghị gị gaa ebe ahụ.” Ọ bụrụ na onye ọ bụla n’ime anyị agaa ebe ahụ naanị mgbe a gwara ya gaa, ọ ga-eme ka ihe niile gaa siriri werere.
19. Olee otú ụmụnna anyị na-agbatara ibe ha ọsọ enyemaka si enye aka egosi na anyị bụ ndị na-eso ụzọ Kraịst n’eziokwu?
19 Kraịst nyere anyị iwu ka anyị ‘na-ahụrịta ibe anyị n’anya.’ Ọsọ enyemaka a anyị na-agbatara ụmụnna anyị bụ otu ụzọ magburu onwe ya anyị si na-eme ihe a Jizọs gwara anyị. Ọ bụrụ na anyị e si otú ahụ na-ahụrịta ibe anyị n’anya, anyị na-egosi na anyị bụ ndị na-eso ụzọ Kraịst n’eziokwu. (Jọn 13:34, 35) Obi dị anyị ụtọ taa na anyị nwere ọtụtụ ụmụnna anyị ndị na-ewepụta onwe ha na-agbatara ụmụnna ha ndị ji obi ha niile na-akwado Alaeze Chineke ọsọ enyemaka. Ọsọ enyemaka a ha na-agbatara ụmụnna ha na-eme ka a na-eto Jehova.
^ para. 3 Isiokwu a ga-eleba anya n’ọsọ enyemaka anyị na-agbatara ụmụnna anyị. Ma, anyị na-enyekwara ọtụtụ ndị na-abụghị Ndịàmà Jehova aka.—Gal. 6:10.
^ para. 5 Pọl jikwa okwu Grik bụ́ di·aʹko·nia kọwaa “ndị ohu na-eje ozi.”—1 Tim.3:12.
^ para. 10 Gụọ ihe e dere n’isiokwu bụ́ “Inyere Ezinụlọ Anyị nke Ndị Kwere Ekwe na Bosnia Aka.” Isiokwu a gbara n’Ụlọ Nche November 1, 1994, peeji nke 23-27.
Olee otú anyị si mara na ọsọ enyemaka anyị na-agbatara ụmụnna anyị so n’ozi dị nsọ anyị na-ejere Jehova?
Olee ihe atọ mere anyị ji agbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka?
Olee uru ọsọ enyemaka anyị na-agbatara ụmụnna anyị na-aba?
Olee otú ọsọ enyemaka anyị na-agbatara ụmụnna anyị si gbasa iwu Jizọs nyere anyị na Jọn 13:34?
ỤMỤNNA SI MBA DỊ ICHE ICHE AGBATARA ỤMỤNNA HA ỌSỌ ENYEMAKA
N’afọ 1994, e gburu ihe dị ka narị puku mmadụ asatọ na Rụwanda mgbe otu agbụrụ chọrọ igbuchapụ agbụrụ ibe ya. Agha a mechara rute obodo ndị ọzọ dị n’Afrịka ha na Rụwanda gba. Agha a mekwara ka ndị mmadụ karịa akarịa n’ogige ndị gbara ọsọ ndụ. E nwere ihe Ndịàmà Jehova nọ na Beljọm, Frans, na Swizaland mere iji nyere ụmụnna ha aka. Ha ji ụgbọelu bugara ha ákwà, ọgwụ, tapolin, ihe oriri, na ihe ndị ọzọ e ji enyere ndụ aka. Ihe niile a e bugaara ụmụnna anyị ga-eju gwongworo iri atọ. Ụmụnna ndị a nwetara ihe ndị a n’ime izu ole na ole.
E nwekwara ụmụnna bụ́ dọkịta na ndị nke bụ́ nọọsụ si Frans gbatara ụmụnna anyị nọ n’Afrịka ọsọ enyemaka. Ha dị mmadụ iri. Agha, ụkọ nri, na ọrịa akpaala ụmụnna anyị ndị a nọ n’Afrịka aka ọjọọ. N’ime afọ abụọ naanị, ndị dọkịta na ndị nọọsụ ahụ lebaara ihe karịrị puku mmadụ iri anya. Aka a ha nyeere ụmụnna ha mere ka e too Jehova, meekwa ka e kwuokwa okwu ọma banyere nzukọ ya. Otu nwanna nwaanyị bụ́ nọọsụ kwuru ihe mere mgbe ha bịarutere. Ọ sịrị: “Mgbe anyị rutere inyere ụmụnna anyị aka, ndị mmadụ hụrụ anyị ma kwuo, sị: ‘Ndị a bụ Ndịàmà Jehova. Ha bịara inyere ụmụnna ha aka.’” Mgbe otu nwanna nwaanyị bụ́ nọọsụ nyechaara otu nwanna nwaanyị aka, nwanna nwaanyị ahụ o nyeere aka kwuru, sị: “Nwanna m nwaanyị i meela. Jehova, i mekwaala!”
Mgbe ụfọdụ, a na-agbatakwara ụmụnna nwere ihe mberede okporo ụzọ ọsọ enyemaka. Dị ka ihe atụ, e nwere otu ihe mberede okporo ụzọ mere na Naịjirịa n’afọ 2012. Ihe mberede a tara isi ụmụnna iri na atọ si n’otu obere ọgbakọ. Mmadụ iri ise na anọ ndị ọzọ merụkwara ezigbo ahụ́. E hiwere kọmitii ga-ahụ na e nyeere ụmụnna ndị a aka. Kọmitii a haziri ka a na-elekọta onye ọ bụla n’ime ụmụnna ndị ahụ mgbe niile n’ụlọ ọgwụ. Mgbe otu onye ọrịa nọ n’ụlọ ọgwụ ahụ hụrụ otú ụmụnna anyị si na-elekọta ụmụnna ndị a merụrụ ahụ́, ọ kpọrọ pastọ ya n’ekwentị. Ọ gwara ya, sị: “Kemgbe m nọ n’ụlọ ọgwụ a, o nwebeghị otu onye chọọchị anyị bịara leta m. Bịagodị n’ụlọ ọgwụ a ka ị hụ otú Ndịàmà Jehova si na-egosi na ha hụrụ ibe ha n’anya.”
Ọ bụ eziokwu na ihe a mere ụmụnna anyị ndị ahụ gbawara ha obi, otú ụmụnna ha si gosi na ha hụrụ ha n’anya kasiri ha obi. Ihe ọzọkwa bụ na mgbe ụmụnna ụfọdụ ha na ha nọ n’ọgbakọ hụrụ otú ụmụnna si na-enyere ndị a merụrụ ahụ́ aka, ha jesiwere ozi ọma ike. Tupu ihe mberede ahụ emee, e nwere naanị ndị nkwusa iri atọ na ise n’ọgbakọ ahụ. Ma n’ime otu afọ ihe a mere, ha dịzi ndị nkwusa iri isii.
N’afọ 2013, idei mmiri kpara mkpamkpa n’otu steeti a na-akpọ Kwinsland. Idei mmiri a mebiri ụlọ Ndịàmà Jehova iri asaa. Otu n’ime ndị idei mmiri ahụ mebiri ụlọ ha bụ Nwanna Mark na Rhonda nwunye ya, nakwa nwa ha nwaanyị. Ha gbagara ebe ndị gọọmenti chọrọ ka ndị idei mmiri ahụ mebisịrị ụlọ ha nọrọgodị. Ndị mmadụ karịrị akarị ebe ahụ. Nwanna Nwaanyị Rhonda kwuru, sị: “Mmadụ niile kwụ ọtọ n’ihi otú mmadụ si karịa akarịa.” Helikọpta ndị na-ebute ndị mmadụ ma na-apụ nọkwa na-adachi mmadụ niile nọ ebe ahụ ntị. Nwanna nwaanyị ahụ jụrụ di ya, sị, “Olee ihe anyị ga-eme?” Gịnị ka di ya mere? O kpere ekpere rịọ Jehova ka o nyere ha aka. Nwanna nwaanyị Rhonda kwuru, sị: “Mgbe ihe dị ka nkeji iri atọ gachara, otu obere ụgbọala gbabatara ebe ahụ anyị niile nọ kwụsị. Ụmụnna nwoke atọ esikwa na ya pụta. Mgbe ha mechara hụ anyị, ha gwara anyị, sị: ‘Anyị bịara ịkpọrọ unu. E nwere otu nwanna nwoke unu ga-anọ na nke ya.’” Nwanna nwaanyị a kwukwara, sị: “Anyị agaghị ekwuli otú obi dị anyị n’ihe a nzukọ Jehova meere anyị.”
Ihe karịrị narị ụmụnna abụọ na iri ise wepụtara onwe ha gaa ebe ahụ mkpamkpa kpara ka ha nyere ụmụnna ha aka. Otu nwanna nwoke merela agadi kwuru, sị: “Mụ na nwunye m nọ otú a hụ ụmụnna kwooro bịa na nke anyị ma malite ikpochasị ihe niile idei mmiri mebiri, meekwa ka ụlọ anyị dịghachi ọcha. Anyị agaghị echefu aka a ha nyeere anyị.”
N’afọ 2008, e nwere ebe ala bizere na steeti Santa Katarina, nweekwa idei mmiri. Ihe a gbawara ihe dị ka puku mmadụ iri asatọ aka ụlọ. Otu nwoke bi ebe ahụ sịrị: “O mere ka ala ọma jijiji. Ọ kwaturu osisi, sọrọ ájá na apịtị sọchie ebe niile.” Ụfọdụ ụmụnna gbagara n’Ụlọ Mgbakọ. Nwanna Márcio, bụ́ onye na-elekọta Ụlọ Mgbakọ ahụ, sịrị: “Naanị ihe ụmụnna ji gbapụta bụ uwe ha yi n’ahụ́. Uwe ha bụ apịtị apịtị.” Otu nwanna nwaanyị kwuru, sị: “Ụlọ anyị dara. Obi gbawara anyị otú o si mie ala n’otu ntabi anya. Ma, agaghị m echefu otú ụmụnna anyị si kasie anyị obi. Ha gbataara anyị ọsọ enyemaka. Ihe a merenụ kụziiri m ezigbo ihe. Ọ kụziiri m na anyị kwesịrị iji ofufe Chineke kpọrọ ihe.”
Ihe a bụ Ụlọ Mgbakọ dị na Santa Katarina, na Brazil. E ji ya mere ebe a na-ebusa ihe ndị e ji gbatara ụmụnna ọsọ enyemaka n’afọ 2009
Ihe a merenụ abụghị nke mbụ o mere na Brazil. O mekwara n’otu obodo dị n’akụkụ ugwu dị nso n’obodo Rio de Janeiro. O mebiri ọtụtụ ihe n’obodo ahụ niile. Ebe ọ bụ na ihe a na-emekarị na Brazil, ụmụnna anyị hiwere Kọmitii Na-ahụ Maka Ịgbatara Ndị Ọdachi Dakwasịrị Ọsọ Enyemaka. Kọmitii a ga na-agbatara ụmụnna ọsọ enyemaka mgbe ụdị ihe a mere. A na-ahọpụtakwa ụmụnna ụfọdụ ndị bi ebe ụdị ihe a na-emekarị ka ha na-akọrọ kọmitii ahụ ihe na-emenụ. E nwee ebe ala bidoro zewe, ụmụnna ndị ahụ na-akọrọ kọmitii ahụ ozugbo. Kọmitii a nụ ya, ha ahọpụta ụmụnna ndị ga-aga ebe ahụ nyere ụmụnna aka. Ụmụnna ndị ahụ na-eji gwongworo e dere ihe n’ahụ́ ha gaa ebe ahụ. Ihe a na-ede na ha bụ “Ụgbọala Ndịàmà Jehova Ji Agbatara Ndị Mmadụ Ọsọ Enyemaka.” Nwanna ọ bụla ga-eso aga ije a ma ihe ọ na-aga ịrụ. Ha na-ejikere ejikere aga. Ha na-eyi polo e dere “Ndịàmà Jehova.” Ha na Kọmitii Ndị Na-ahụ Maka Mmekọrịta Anyị na Ndị Ụlọ Ọgwụ na-eso enyere ụmụnna merụrụ ahụ́ aka. Ha na-ebutere ha ihe oriri, mmiri, ọgwụ, ákwà, na ihe ndị dị ka ncha. Ọ dịghị mfe ihicha ụlọ bụ́ apịtị apịtị. Mgbe ala bizechara n’otu ebe n’oge na-adịbeghị anya, ọ bụ ụmụnna iri isii kupụrụ ájá na apịtị juru n’otu ụlọ nwanna. Ihe ha kupụtara n’ụlọ ahụ juru tipa anọ.
OTÚ ANYỊ SI AKWADEBE MAKA ỌDACHI
Òtù Na-achị Isi gwara alaka ụlọ ọrụ niile ka ha gwa ndị okenye niile na ndị nlekọta na-ejegharị otú ha ga-esi jikere maka ọdachi na otú ha ga-esi nyere ụmụnna ndị ọdachi dakwasịrị aka. Dị ka ihe atụ, tupu ọdachi emee, ndị okenye kwesịrị inwe nọmba ekwentị nke ndị nkwusa niile nọ n’ọgbakọ ha.
Ndị okenye ga-achọpụta ebe ndị nkwusa niile nọ n’ọgbakọ ha nọ
Ndị okenye chọpụtachaa ebe ndị nkwusa ha nọ, ha akọọrọ onye na-ahaziri ndị okenye ọrụ otú ihe si kwụrụ
Ndị na-ahaziri ndị okenye ọrụ ga-akọziri ndị nlekọta na-ejegharị ejegharị na ụmụnna ndị ọzọ, bụ́zi ndị ga-akọrọ alaka ụlọ ọrụ otú ihe si kwụrụ
A na-agba mbọ ozugbo bugara ụmụnna ndị a ọdachi dakwasịrị nri, mmiri, ọgwụ, tapolin na ihe ndị ha ga-eji ehi ụra. A na-ejikwa Baibụl agba ha ume ma na-akasi ha obi
Alaka ụlọ ọrụ na-akọrọ Kọmitii Na-ahaziri Òtù Na-achị Isi Ọrụ ihe merenụ na ihe ndị dị ụmụnna ndị ahụ mkpa
Kọmitii Na-ahụ Maka Ịgbatara Ndị Ọdachi Dakwasịrị Ọsọ Enyemaka na-ahazizi otú a ga-esi nyere ụmụnna ọdachi dakwasịrị aka
Kọmitii Na-ahaziri Òtù Na-achị Isi Ọrụ matachaa otú ihe si dị, ha nwere ike iziga ụmụnna ndị si mba ọzọ ka ha gaa nyere ụmụnna anyị ndị ahụ ọdachi dakwasịrị aka
IHE NA-ENYEKWURU ỤMỤNNA AKA ỊGBATA ỌSỌ ENYEMAKA
N’ỌNWA Jun afọ 2013, e bipụtara broshọ a na-akpọ Jehovah’s Witnesses and Disaster Relief. Ndị e bu n’obi bipụta ya karịchaa bụ ndị ọrụ gọọmenti Amerịka na-ahụ maka ịgbatara ndị mmadụ ọsọ enyemaka. Na broshọ ahụ, e kwuru ụfọdụ ọsọ enyemaka anyị gbataara ma ụmụnna anyị ma ndị ọzọ kemgbe afọ 1945. Ihe ọzọ dị na broshọ a bụ map nke gosiri mba dị iche iche anyị gara gbatara ụmụnna anyị ọsọ enyemaka. Otu okenye so na-ahazi ọsọ enyemaka a kwuru ihe a na-eji broshọ a eme. O kwuru, sị: “Tupu ọdachi emee, ụmụnna so na Kọmitii Na-ahụ Maka Ịgbatara Ndị Ọdachi Dakwasịrị Ọsọ Enyemaka na-eji broshọ a agakwuru ndị ọrụ gọọmenti nọ n’ebe ọdachi na-emekarị. Ndị ọrụ a matachaa otú anyị si eme ya, ọ na-adịziri anyị mfe ịnata ha ikike ịbanye ebe ndị ahụ ọdachi mere.”
mailto:?body=Ịgbatara Ụmụnna Anyị Ọsọ Enyemaka%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102014262%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ịgbatara Ụmụnna Anyị Ọsọ Enyemaka